यी हुन् सबैभन्दा धेरै यौन व्यापार हुने १० देश जहाँ मन्त्री देखि जनता बेश्यालय धाउँछन् «
यी हुन् सबैभन्दा धेरै यौन व्यापार हुने १० देश जहाँ मन्त्री देखि जनता बेश्यालय धाउँछन्
प्रकाशित मिति : ८ जेष्ठ २०७६, बुधबार १६:२१
एजेन्सी- यी हुन् विश्वमा सबैभन्दा धेरै यौन व्यापार हुने देश ! जहाँ मन्त्री अनि सबै जनता नै बेश्यालय धाउँछन्, !
यौन व्यवसायको मुख्य स्रोत हो चेलीबेटी बेचबिखन । नेपालमा यस्ता धन्दाहरु अवैध रुपमा धेरै हुने गरेका छन् । साना साना बालबालिका देखि लिएर उमेर पुगेका थुप्रै महिला तथा बालबालिकाहरुलाई विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरु देखाएर अन्य देशमा लगेर बेचबिखन गरिदै आएको थुप्रै घटनाहरु रहेका छन् । बेश्यावृतिलाई विश्वकै सबैभन्दा पुरानो व्यापारको रुपमा लिने गरिन्छ । त्यस्तै आज हामी तपाईलाई नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा सबैभन्दा धेरै देहव्यापार हुने केही देशको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ ।
१.चीन : विश्वको सबैभन्दा धेरै यौन व्यापार हुने देश मध्येमा चीन पहिलो नम्बरमा नै परेको छ । एक परिवार एक सन्तान नियम लागु भएको देश चिनमा यौन व्यापार अत्याधिक रुपमा हुँदै आएको छ । विश्वमा गरिएको एक अनुसन्धानले चिनमा ५ खर्ब वेश्या रहेको देखिएको छ ।
२.स्पेन : विश्वमा यौन व्यपार गर्ने देश मध्ये दोस्रो नम्बरमा स्पेन देखिएको छ । यो देशमा बर्षेनी करिब २६ दशमलव ५ अर्ब डलर बराबरको देह व्यापार हुने देखिएको छ । २९. ५ मिलियन डलर स्पेनले यौन व्यापारमा खर्च गर्ने पाइएको छ ।
३.जापान : विश्वमा देह व्यापार हुने तेस्रो देशको रुपमा जापानलाई लिने गरिन्छ । यहाँ बर्षमा करिब २४ अर्ब डलर बराबरको यौन व्यापार हुन्छ ।
४.जर्मनी : चौथो ठूलो यौन व्यापार हुने देशको रुपमा जर्मनलाई लिने गरिन्छ । कानूनी रुपमा हेर्ने हो भने जर्मनमा बैध रुपमा यौन व्यापार हुँदै आएको छ । करिब ४ लाख बेश्याहरु रहेको देशमा वर्षेनी १८ अर्ब डलर बराबरको यौन व्यापार हुने गर्छ ।
५.दक्षिण कोरिया : दक्षिण कोरियालाई पनि विश्वमा सबैभन्दा बढी देह व्यापार हुने देशको रुपमा लिइएको छ । यहाँ करिब १ लाख ४७ हजार वेश्या रहेका छन् भने वर्षेनी १२ अर्ब डलर बराबरको देह व्यापार हुन्छ ।
६.अमेरिका : विश्वको सबैभन्दा शक्तिसाली मानिएको देश अमेरिका देह व्यापारमा पनि उत्तिकै सक्रिय रहेको छ । यहाँ बर्षेनी १४.६ अर्ब बराबरको देहव्यापार हुने गर्छ । कानुनी मान्यताको साथ देह व्यापार शुरु गरेको यो देशमा १ मिलियन वेश्याहरु रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
७.भारत : देश व्यापारको शिलशिलामा सातौँ नम्बरमा परेका भारतमा बर्षेनी ८.२ अर्ब डलर बराबरको व्यापार हुने गर्छ । छिमेकी मुलुक भएको कारण भारतमा प्राय जसो धेरै नेपाली महिलाहरु यौन धन्दामा संलग्न रहेका छन् ।
८.थाईल्याण्ड : बेश्यावृतिको लागि निकै नामा चलेको देश थाईल्यान्डमा वर्षमा ६.४ अर्ब डलर बराबरको यौन व्यापार हुने गरेको छ । उक्त देशमा कम्तिमा पनि २ लाख ५० हजार बेश्या रहेका छन् ।
९.फिल्लीपिन्स : छोटो समयमा बेश्यावृति एकदमै फस्टाएको यो देशमा २ लाख वेश्याहरु रहेको पाइएको छ । वर्षेनी ६ अर्ब यौन व्यापारमा खर्च हुने गर्छ ।
१०.टर्की : विश्वकै कम देह व्यापार हुने यो देशमा भारत हुँदै कयौ नेपाली चेलीहरु टर्की लगिएको पाइएको छ । -एजेन्सीको सहयोगमा